Ama & Okunye
Hollywood Vanity Mirror, isitayela Makeup Mirrors nge Lights, Tabletop noma Wall egibele
Hollywood IZE kwesibuko AMALAMBU
I BEAUTME Hollywood Vanity Mirror kuyinto-a kuyize yesimanje isakhiwo esincane okuchachambile okwamanje bubuhle ukuthi ihlinzeka ephelele, ngisho kokukhanyisa futhi ephakeme esibukweni kuveza ukucaciseleka. Ideal for izimonyo lokusebenza nganoma isiphi kulungiselelwa, ekhaya noma professional-futhi ngokuthatha ukuthi ephelele Instagram selfie!
Tabletop / UDONGA likhuliswe Mirror
Izinhlobo ezimbili Using- 1) Beka esibukweni makeup on etafuleni; 2) Hang le rror mi ku thewall
Sebenzisa isimo esibukweni etafuleni
Vanity esibukweni ukulengiswa phezu kodonga
Usizo lwabenza imisenenzi Vanity Mirror nge Lights ukukhetha lokuvala ukukhanya ukukhanya kosuku, ukuze baqonde kangcono ngezinga komthunzi. Made of high aluminium Uhlaka, uzimele oqinile okuqinile futhi varnished tinplate zensimbi base uyivumele ukuhlala eziqinile phezu kwetafula. Ecwebezelayo Seamless splicing Uhlaka kwenza esibukweni ngaphezulu ephezulu grade futhi emuhle.
Londoloza ugesi, imfashini kanye nokuvikelwa kwemvelo.
1. Thinta kancane ukuze uvule / vala efudumele ukukhanya / ngosuku ukukhanya.
2. Bamba eside thinta ukuze ulungise ukukhanyisa ukukhanya.
IMIKHIQIZO YANGEMPELA shot
Okulandelayo: Lighted Vanity Mirror with LED UV Nail,Tabletop Beauty Mirror
Amandla: 100-240V, DC12V / 1A Plug-in-adaptha
LED izibani umbala: ukukhanya yellow efudumele (3200k) & white usuku ukukhanya (6500k)
usayizi Glass: 598mm (L) * 498mm (H) (23.54 "* 19,6");
usayizi yomkhiqizo: 600mm (L) * 180mm (W) * 530mm (H) /23.62 "* 7,08" * 20,86 ";
Mirror Isisindo: mayelana 5kg
Packaging Yekuchumana: EPE Foam + Ibhokisi Iphakheji
Hollywood Vanity Mirror Nge Lights
Esibanzi Usayizi Hollywood Vanity Mirror
Ize Mirror Hollywood
eliqinisekisiwe lokubona i Ukuthengwa
Hollywood isitayela elikhanyayo Tabletop Makeup Mirror, ...
Elikhulu Hollywood Vanity Mirror, Tabletop noma Wall ...
Hollywood elikhanyayo Vanity Mirror LED UV Nai ...
Landela @Beautmeclub Facebook for enikezwa zakamuva
CONTACT & USIZO
Udinga ulwazi olwengeziwe? Sicela uxhumane nathi ukuze uxazulule noma iziphi izinkinga mayelana nemikhiqizo BEAUTME.
© 2010-2020 BEAUTME. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Hot Products , i- Ibalazwe , i- AMP Ucingo
Ize Khanyisa Ama , Vanity Mirror Nokukhanya Ama, Mirror Nokukhanya Ama , Makeup Mirror Nokukhanya Ama,